​७ नम्बर प्रदेश एमालेको गढ भइसक्यो, कांग्रेसले फर्काउन सक्दैन- दामोदर भण्डारी, सांसद, बैतडी एवं पूर्वअर्थराज्यमन्त्री
Sunday, 28 Jan, 2018 1:06 PM
कांग्रेस र राप्रपाले वर्षौंदेखि शासन गर्दै आएको बैतडीमा एमालेले निरन्तर जीत निकालेको छ । एमाले युवा नेता दामोदर भण्डारीले बैतडीलाई ५ वर्षदेखि संसदीय नेतृत्व दिएका छन् । अबको ५ वर्ष भण्डारीले नै जिल्लाको जनप्रतिनिधिको नेतृत्व लिएका छन् । बहालवाला राज्यमन्त्री नरबहादुर चन्दलाई ११ हजार २ सय ३३ मतले हराउँदै भण्डारी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा निर्वाचित भएका छन् । २०३० साल कात्तिक २० बैतडी पाटनमा जन्मिएका भण्डारी २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि कम्युनिष्ट राजनीतिमा क्रियाशील भए । बीएसम्म अध्ययन गरेका भण्डारीले जिल्लामा अनेरास्ववियुको नेतृत्व गरे । पार्टीमा तीन पटक कार्यकाली नेतृत्व (दुई कार्यकाल सचिव, एक कार्यकाल अध्यक्ष) भएका भण्डारी २०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा वडा सदस्य निर्वाचित भएका थिए । तर, डेढ दशकमै भण्डारीले संसदीय चुनावमात्रै जितनन् बहुचर्चित केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा अर्थराज्यमन्त्री भए । प्रस्तुत छ भण्डारीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–
चुनाव जितेपछि के गर्दै हुनुहुन्छ ?
म मात्रै होइन, चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिहरु अहिले सडकमा छौं । तर, पराजित भएकाहरु सत्तामा छन् । झण्डावाल गाडीमा हिड्नेमात्रै होइन, जनमतको अवमूल्यन हुने गरी मनपरी निर्णय गरिरहेका छन् । निर्वानन आयोग र सरकारले जनमतको उपहास गरेको छ । कुनै पनि मुलुकको सरकारले र लोकतन्त्रमा विश्वास गर्नेहरुले कानुनका छिद्र देखाएर नयाँ जनमतको अस्वीकार गर्ने काम गर्दैन । शेरबहादुर देउवाजीले त कांग्रेसको बचेको साखसमेत गिराउनुभएको छ । भारतले बधाई दिएको छ, अन्तर्राष्ट्रिय समूदायले बधाई दिएपछि भेटेका बेलामा उहाँले चुनाव जितेको दलका नेताहरुलाई औपचारिकताका लागिमात्रै बधाई दिनुभयो । न्यूनतम राजनीतिक संस्कार पनि उहाँमा देखिएन ।
अलिकति ढिला भए पनि के बिग्रन्छ र ? सत्ता हस्तान्तरण त गर्नु नै होला नि ?
प्रक्रियाभन्दा नियतको कुरा हो । वाम गठबन्धनले अहिले सत्ता सञ्चालन गर्न पाएको भए घोषणापत्रका आधारमा धेरै गर्न सक्दथ्यो । सरासर जनताको अपमान, गलत उद्देश्य गलत मनसायले निर्वाचन आयोग र कांग्रेसले गतिविधि गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीलाई तपाईंहरुले लोकतन्त्र नै मास्नुहुन्छ कि भन्ने डर छ रे नि त ?
लोकतन्त्र एमालेले होइन, कांग्रेसले अझ शेरबहादुर देउवाजीले पटक पटक मास्नुभएको छ, राजालाई बुझाउनुभएको छ । चुनावमा उहाँले लगाएका आरोप आफूतिरै तेर्सिएको छ । के उहाँले लोकतान्त्रिक संस्कार देखाउन सक्नुभयो कि भएन ? लोकतान्त्रिक गठबन्धन लोकतान्त्रिक विधिमा कतिको अडियो ? जवाफ उहाँले नै दिनुपर्छ ।
बहालवाला राज्यमन्त्रीलाई हराउँदै दोस्रोपटक चुनिनुभएको छ । व्यक्तिगत प्रभाव हो कि एमालेको देशव्यापी लहर ?
बैतडी जनसंख्याले ठूलो भए पनि ५८ प्रतिशतमात्रै मत खस्यो । नत्र ५० हजार मत हाम्रो नाघ्थ्यो । स्थानीय तहको चुनावमा एमाले र कांग्रेसको मत उस्तै । माओवादी केन्द्रको मत हामीसँग जोडियो । माओवादीको १८ हजार मत, राप्रपा, लक्काभाइलगायत अखण्ड सुदूरपश्चिम आन्दोलनका साथीहरु आएपछि विजय सहज भयो । विकासका एजेण्डा, आर्थिक समृद्धि, राष्ट्रिय एकताका पक्षमा पार्टीले लिएको अडानले काम ग¥यो । अर्थराज्यमन्त्री हुँदा मैले जति बजेट जिल्लाका लागि लैजान सकेँ त्यसले पनि जनताको विश्वास जित्न सहज भयो ।
भनेपछि सांसद र राज्यमन्त्री भएर राम्रो काम गरेको तपाईंको ठम्याइ हो ?
शेरबहादुर देउवाको क्षेत्र जोडिएको जिल्ला हो मेरो । बहालवाला राज्यमन्त्रीसँग चुनाव लडेँ । प्रभावशाली कांग्रेसका नेताहरु सुदूरपश्चिमको भूगोलको राजनीति गर्नुहुन्छ । संगठन पनि कांग्रेसको राम्रो छ । पहिलोपटक निर्वाचित भएर काम गर्दा विकास, पूर्वाधार सामाजिक न्यायमा इमान्दार भएर काम गरे । मन्त्री हँुदा÷नहुँदा निरन्तर जनतासँग काम गरेँ । केपी शर्मा ओलीको सरकारले सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट १५ क्याम्पसलाई आंगिक क्याम्पस बनाउन सफल भयो । सँगै गीत बनिरहेको मेडिकल कलेज स्थापना भयो । सहिद दशरथ चन्द मेडिकल कलेज बनाउन सफल भयौं । सडक शिक्षा स्वास्थ्यमा जुन काम ग¥यौ त्यसलै जनताले विश्वास दिए ।
जितको पछाडि चुनावमा विकासका मुद्दाले काम गरेको रहेछ उसो भए ?
हो, सुदूरपश्चिममा मात्रै नभई राष्ट्रिय राजनीतिमा चर्चा भएको पञ्चेश्वर परियोजना र पश्चिम सेती आयोजनाका विषयमा मैले खुलारुपमा आफ्ना धारणा राखेँ । ती दुई आयोजना कुनै जिल्लामात्रै नभई समग्र ७ नम्बर प्रदेशको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएका छन् । मैले सिंगो देशको ध्यान खिच्ने गरी चुनावको बेला ती मुद्दा उठाएँ । पञ्चेश्वर बने २० हजार जनाले रोजगारी पाउँछन्, बहुदेश्यीय परियोजना भएकाले कृषि, पर्यटन, जडिबुटी, जलस्रोतको क्षेत्रमा ढोका खोल्छ । पश्चिम सेती पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । ओली सरकारको नीति कार्यक्रम र बजेटमा परेपछि विकास र पूर्वाधारमा पछाडि परेको सुदूरपचिममा अब आर्थिक कालापलट हुन्छ ।
जिल्लाको विकासका सन्दर्भमा चाँही कस्ता मुद्दाहरु थिए ?
बैतडीमा कृषिजन्य उत्पादनका क्षेत्रमा धेरै सम्भावना छन् । माहुरी बैतडीको ब्रान्ड हो । चिउरी, तरकारीबाली, अन्न बाली र पशुजन्य व्यवसायको सम्भावना छ । यूरेनियम, फलामखानीको अध्ययन भएको छ, चुन उद्योग र अन्य उद्योगहरु बैतडीमा स्थापना गर्न सकिन्छ । समृद्ध बैतडी समृद्ध सुदूरपश्चिमको अभियान लिएर चुनावमा गएको थिएँ । सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता विषयमा आफ्नो अवधारणा राखेको छु ।
अर्थराज्यन्त्री भएर मुलुकको ढुकुटी देखिसक्नुभएको छ । कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ त ?
इच्छाशक्ति भयो भने र सरकारको नेतृत्व असल भयो भने असम्वभ छैन । बजेट कसरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ, समस्या के हुन् ? हामीलाई थाहा छ । पुँजीगततर्फको खर्च वृद्धि गर्न सकेका छैनौं । चाह्यौ भने परिणामका आधारमा खर्च गर्न सकिन्छ । बजेट अभाव हुन्छ जस्तो लाग्दैन । अहिले ५० प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । जेठमा बजेट आउँछ, एक महिनापछि पारित हुन्छ । पारित भएपछि योजनाको डीपीआर र अख्तियारी दिने काम एक महिनामा पूरा गर्न सकिन्छ । योजना सुरु भएपछि कर्मचारी सरुवा नगर्ने, योजनाको अनुगमन गर्ने प्रणाली विकास ग¥यो भने धेरै काम गर्न सकिन्छ । ओली सरकार टिकेको भए बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेका विषयमा ४० बुँदे योजना संसदमा नै छलफल गरेर अगाडि बढाउने योजना थियो ।
स्थानीय चुनाव, प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभामा ७ नम्बर प्रदेशमा एमालेले राम्रो नतिजा ल्याएको छ । शेरबहादुर देउवाको गढ भनेर चिनिएको क्षेत्रमा तपाईंहरुले के चमत्कार गर्नुभयो ?
पक्कै पनि ७ नम्बर प्रदेशलाई कांग्रेसको बर्चश्व क्षेत्र भनिन्थ्यो । अघि बढ्न नसकेको कारणहरु खोजी गर्दा चार पटक लोकेन्द्रबहादुर चन्द र चारपटक शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री बन्नुभयो । उहाँहरुले आफ्नो क्षेत्रका लागि केही गर्नुभएन । ७ नम्बर प्रदेशका जनता न्यायको पक्षमा उभिएका छन्, विकास पूर्वाधारले मात्रै हुँदोरहेनछ, जनताले सामाजिक न्याय पनि खोजे । समाज निर्माणका लागि यथास्थितिवादीबाट सम्भव छैन भनेर परिवर्तनको वाहककोरुपमा रहेको एमालेले अगुवाइ ग¥यो । एमालेको अहिलेको नृेतृत्वप्रति विश्वास गरेर मत दिएका छन् । प्रमुख संवाहकोरुपमा केपी शर्मा ओलीले जुन मुद्दा उठाउनुभयो, त्यसको विश्वासको मत हो । अब एमालेको गढ भएको छ ७ नम्बर प्रदेश, कांग्रेसले फर्काउन सक्दैन ।
देउवाप्रति किन विश्वास भएन त ?
उहाँबाट न राजनीतिक स्थायित्व भयो न विकास । लोकतन्त्र दरबारमा बुझाउनेदेखि अहिले संविधान संशोधनका नाममा देशलाई नै बिखण्डनको बिउ रोप्ने काम देउवाबाट भएको जनताले बुझे ।
जनमत जोगाउने चुनौति पनि होलान् नि ?
स्वभाविकरुपमा चुनौतिहरु छन् । ती चुनौति सामना गर्न सक्छौं भन्ने विश्वास छ । ज्यादै लामो पर्खाइमा रहेका सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्नुपर्छ । पञ्चेश्वर बनाउनुपर्छ, पश्चिम सेती बनाउनुपर्छ । जल, जमिन, जंगल र सम्पदाहरु जोगाउनुपर्छ । सबै सम्भावना हुँदा पनि गरिबीका गीत गाइरहेका छौँ । सम्भावनाका ढोकाहरु खोल्यौं भने एमालेका पक्षमा देखिएको जनमत वृद्धि हुँदै जानेछ ।
नयाँ सरकारबाट ७ नम्बर प्रदेशका जनताको अपेक्षा के पाउनुभएको छ ?
हिजो समस्या देखाउने र भाग्ने काम गरे शेरबहादुर र लोकेन्द्रबहादुरले गरे । बाम गठबन्धनको नेतृत्वले यो कुरालाई बुझेर काम गरेको छ । सुनसरीको जति बजेट तत्कालिन सुदूरपश्चिममा जाँदैनथ्यो । देउवा प्रधानमन्त्री हुँदा पनि १२ प्रतिशतभन्दा बढी गएन । ओली सरकारको पाला १५ प्रतिशतभन्दा बढी बजेट गएको छ । सडक पूर्वाधारदेखि टिंकर र तक्लाकोट नाका खोल्ने काम भएको छ । बजेटको अभाव छैन । दुइटा नाका खोल्यौं भने त्यही सरकारको पालामा कञ्चनपुर कैलालीको दैजीमा औद्योगिक क्षेत्र घोषणा, लम्कीलाई औद्योगिक क्षेत्र बनाउने, दोधारा चाँदनी सुख्खा बन्दरगाह, पूर्वपश्चिम राजमार्ग चार लेन, १५ क्याम्पस आंगिक, मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने काम भएको छ । हिजोका आयोजनाको पूर्णताका लागि पनि नयाँ सरकार सक्षम छ ।
राष्ट्रिय राजनीतिको चर्चा गरौं, पार्टी एकतामा संशय छ, एकीकरण हुन्छ त ?
एमाले र माओवादीभित्र आशंका छैन । राजनीतिक मुल्य मान्यता संगठानात्मक संरचानामा अझै बृहत् छलफल गर्नुपर्छ । पार्टी एकताको विषय हतारमा आज भोलि टुंग्याउने विषय होइन । पार्टी एकता चुनावबाटै अनुमोदन भएको विषय हो ।
एमाले अध्यक्षले सरकारको नेतत्व गरे पार्टी नेतृत्व माओवादी केन्द्रका अध्यक्षले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने मागमा तपाईंको धारणा के छ ?
हामीले ६०–४० भागबण्डा ग¥यौं । जनताले ७०÷३० को म्यान्डेट दिए । अहिलेको गठबन्धनको च्याम्पियन केपी शर्मा ओली हो । स्वभाविक सरकारको नेतृत्व उहाँबाटै हुने भयो । जनमतको आधारमा पार्टी एकता हुन्छ । हामी ५०÷५० प्रतिशत जनमतको अवस्थामा भएको भए एउटाले सरकारको र अर्काले पार्टीको नेतृत्व हुन्थ्यो । तर दलीय व्यवस्थामा नेतृत्वलाई काम आकलन गरेर भागबण्डा गरौं भन्ने मान्यता सही होइन । जसको विचारले विजय प्राप्त ग¥यो उसैले पार्टीको नेतृत्व गर्छ, प्रचण्ड कमरेडलाई पार्टीको प्रोटोकलका आधारमा उचित नेतृत्व दिनुपर्छ । कार्यकर्ताहरु मिलिसकेकाले जनमतका आधारमा अगाडि बढ्नुपर्छ ।
पार्टीभित्रै नेतृत्व हस्तान्तरणको विषय उठेको छ नि ?
हस्तान्तरणका विधि प्रक्रिया पार्टीले खोज्नुपर्छ । तर त्यो बेला भएको छैन । जुन विचार र नेतृत्वले जितेको छ, उसले नेतृत्व नगर्दै यो विषय किन उठाइयो थाहा छैन । उमेरका आधारले हस्तान्तरण गर्नुपर्ने हो र ? लोकतान्त्रिक मुल्य मान्यता, राष्ट्रिय स्वाधिनता र विकासका लागि केपी शर्मा ओलीलाई जनताले मत दिएका हुन् । त्यसलाई छाडौं, नयाँलाई दिऊँ भन्नुको तात्पर्य के हो ? कसलाई छाडौं भन्न खोजिएको हो ? कसलाई अब्बल देखाउन खोजिएको हो ? नेतृत्वलाई कमजोर पार्ने गरी र जनमतको अपमान हुने गरी आएका विचारलाई मान्नुपर्ने भन्ने छैन ।
अर्थराज्यमन्त्री भइसक्नुभएको छ । मन्त्रीको दौडधूपमा हुनुहुन्छ कि ?
मन्त्रीको दौडधूपमा पटक्कै छैन । मुल नेतृत्वलाई अनुकूल हुनेगरी मन्त्री चयन हुनुपर्छ । योग्यता क्षमताले खारिएका धेरै नेताहरु एमालेमा हुनुहुन्छ । तर सरकारको नेतृत्व गर्ने आवश्यकता र भूगोललाई ध्यान राखेर सक्षम अनुभवी टिम छनोट हुनेछ ।